Challenge The Good News Paper - Engenanina (Zulu)
Ngesikhathi eneminyaka engu 16, yena nomngani wakhe badlwengula amantombazane amathathu ngobusuku obubodwa wagcina ezithola esejele, ezenyanya ngenxa yalokho akwenzile ezonda nabanye abantu ngenxa yezinto ezamholela kulesisimo.
"Ngokocansi ngangi ngcolile ngibuswa utshwala, nenzondo nokuzi khukhumeza, " uDavid owayeziwa njengo "Nice" uyavuma. "Ngangi vamise ukuba namakhosikazi namantombazane amaningi ngenxa yokuzi khukhumeza. Ngangizibona ngibalulekile ukudlula abanye abantu. "
Ejele uDavid owayengazi lutho ngobuKrestu, wabona abanye ngaphakathi ejele beya enkonzweni naye wathatha isinqumo sokuba joyina.
"Ngezwa ngoJesu khona la ejele ngezinye izibosbwa nabafundisi ababesivakashela bebuya ngaphandle. Ngesikhathi ngibona UJesu enika izibosbwa insindiso ebathethelela izono zabo, ngabona ukuthi ngiyamdinga loNkulunkulu.
"Ngomhlaka 4 December 2013 ngamukela uKristu njenge Nkosi noMSindisi wempilo yami, uDavid usakhumbula.
UDavid ufunda kwabaseGalathiya ngezithelo zikaMoya kaNkulunkulu uthando, intokozo, ukuthula, ukubekezela, ubumnene, ukulunga, ukuthembeka nokuzithiba, wayazi ukuthi ayikho into angayenza ngaphandle kokuthi amukele uJesu njenge Nkosi abe ngumKrestu.
Manje uDavid akasaziboni engcono ukudlula abanye abantu futhi nenzondo akasenayo, Kepha ubaxolele labo abamphatha kabi, naye uyicelile intenthelelo kulabo angazange abaphathe kahle.
Uthini njengoba echitha isikhathi efunda iBhayibheli futhi ekhuleka, uyinqobile imikhuba yakhe futhi useyabathanda abantu futhi uyabakhathalela.
"UNkulunkulu muhle. Yingakho wathumela iNdodana yakhe ezelwe yodwa ukuba izosifela. NguNkulunkulu yedwa ongakunikeza amandla okuhlukuna nemigulukudu. Ungakwazi ukuqonda nokulicacisa iZwi [iBhayibheli] UNkulunkulu unecebo ngempilo yakho, ukukuphumelelisa, kungeyona eyobubi (Funda uJeremiya 29:11). Fundamentally iZwi!"
Ukulahlekelwa umzali akuchazi ukuthi sekuphelile ngawe. UNkulunkulu uzoba ngumzali wakho.
"Ngigcine sengazi ukuhlabelela nokushumayela nokushaya izigubhu esizikhalisa enkonzweni. Akumayelana nami, kungenxa yothando UNkulunkulu yothando UNkulunkulu analo ngami, " uyachaza uDavid. •
<< Sonder ‘n ma (Afrikaans)
Kushaya amai (Shona) >>